Home Wararka Kenya oo ka dalbatay Deni in uu dalkeeda ka baxo
Kenya oo ka dalbatay Deni in uu dalkeeda ka baxo
Maanta oo Axad ah ayaa lagu wadaa in Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni uu dib ugu soo laabto Garoowe Caasimadda Puntland, kadib safar todobaadyadii la soo dhaafay uu ugu maqnaa dalka Kenya.
Madaxweyne Deni ayaa Magaalada Nairobi ka waday kulamo hoosaadyo ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo kuwo ku saabsan Arrimaha Maamulka Puntland.
Sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay u sheegeen MOL, waxaa saraakiil ka tirsan Dowladda Kenya ay ku wargeliyeen Saciid Deni in uu dalka isaga baxo. Lama oga sababta rasmiga ah balse waxaa uu Deni ku guul darreystay in uu arko Madaxweynaha Kenya oo uu muddo ku sugayay magaalada Nairobi waxaana jimcihii lagu wargeliyay in uu dalka ka baxo sabab la’aan.
Markii uu dib ugu soo laabto Magaalada Garoowe Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa la filayaa in dib loo bilaabo doorashada Golaha Shacabka ee hakadka kujirta tan iyo markii dalka Kenya uu aaday Madaxweynaha Puntland.
Wararka la helayo ayaa sheefaya in Puntland ay haatan diyaarineyso sidii loo bilaabi lahaa degaan doorashada labaad ee Magaalada Boosaaso , sidoo kalena la dhameystirayoixda kursi ee ka hartay kuraasta taalla Magaalada Garoowe.
Previous article[Daawo] Cabduweli Sheekh Ibraahim Muudeey oo loo diiday in uu tago Baraawe
Next articleMuudey: Waxaad noqotay “Xabaale Qode Xabaalkiisa la Qoday”
Maxaa ka jira in Al-shabaab duulaan ku yihiin Guriceel !